Imibono yesitayela yokugqoka ivesti eboshiwe kulobu busika | Amadoda aSitayela
Izindlela ezinhlanu zokuhlanganisa ivesti yakho eboshwe
UMiguel Serrano | | imfashini, Amathrendi
Ngaphandle kokusebenza kakhulu, ivesti eligxiliwe libonakala ngokuhlukahluka kwalo. Ungayisebenzisa ezimweni eziningi, kufaka phakathi oLwesihlanu abajwayelekile nangezimpelasonto.
Eyaziwa nangokuthi i-gilet, le mibono elandelayo ukuhlanganisa ivesti lakho eligwedlile kulobu busika. Ukubukeka okuhlukahlukene okukhombisa ukuthi le ngubo ingaba umlingani omuhle kakhulu kuma-chinos akho, kepha nangamabhulukwe akho ancibilikisiwe nabagijimi:
1 Ukubukeka okungajwayelekile okuhle
2 Ukubukeka okuncane
3 Ukubukeka okuvamile
4 Bheka «umsebenzi»
5 Ukubukeka kwezemidlalo
Ukubukeka okungajwayelekile okuhle
UPolo Ralph Lauren
IFarfetch, € 207
Amavesti agxiliwe zisebenza kahle kakhulu ekubukekeni okungajwayelekile okuhle. Lapha le ngubo ibhangqwe nejezi phezu kwehembe, ama-beige chinos namabhuthi amaqakala eBrogue.
Umango, € 49.99
Lapha umphumela omncane utholakala ngokuhlanganisa i- ivesti elimnyama elimbozwe ngamabhulukwe amnyama amathebhu, ijezi le-navy blue turtleneck namateku amhlophe esikhumba.
UZara, € 19.95
Yize ngokuvamile kuhlotshaniswa nesitayela se-preppy, ama-vest ahlanganisiwe Aziphikisani nakancane lapho sifaka izingubo ezijwayelekilenjengama-hoodies, i-jean kanye namateku ngokuvalwa kwe-velcro.
UMnu Porter, € 1.300
Le vest yePolo Ralph Lauren inhle kakhulu, ngoba ilandela umugqa wezingubo zokusebenza wazo zonke izingubo zokubukeka (ihembe le-flannel plaid, ijini emnyama eluhlaza okwesibhakabhaka namabhuzu ezinyawo zesitayela se-moccasin). Kepha akubalulekile ukuthi ivesti ibe ngalesi sitayela ukwakha ukubukeka kwesitayela "komsebenzi".
I-Uniqlo, € 49.90
Bhangqa ivesti lakho eligwedlisiwe ngehembe elinenkinobho ephansi, abagijimi, nabaqeqeshi (abadingi ukuba yi-monochrome). Khetha amathoni amnyama we-vesti futhi alula ezinye izingcezu uma ufuna ukuthi ukubukeka kwakho kwezemidlalo kubukeke kuhlanzekile futhi kupholile njengale.
Qaphela: Zonke izintengo ngezamavesti ahlanganisiwe kuphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Izindlela ezinhlanu zokuhlanganisa ivesti yakho eboshwe
Ubusuku bonyaka omusha, ibhantshi noma ijazi?
Uyasazi isitayela seRock Chic sabesilisa?